ဒြပ်မဲ့များနှင့် ကခုန်ခြင်း ~ ရင်နင့်အောင်ရဲ့ ဘလော့ခ်
11:25 AM ရင်နင်အောင် No comments
အား ………………….. ပြဿနာပဲ .. အသက်ရှုလို့ မရတော့ဘူး ..
မွေးကတည်းက ရှုလို့မကုန်တဲ့ လေတွေ ဘယ်ကို ရောက်သွားပါလိမ့် …
လေတွေ … လေတွေ .. ဘယ်မှာလဲကွ .. လူတွေ ဇွတ်ရှူလို့များ ကုန်သွားတာလား … စဉ်းစားစရာ … မဖြစ်နိုင်ပါဘူး .. နေပါဦး .. လေဆိုတာ ကုန်တဲ့ အမျိုးလား ..
အား.. အသက်ရှူလို့မရတော့ဘူး .. ငါ ..
ငါ.. သေ … တော့ .. မှာ .. လား ………
ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာ .. ကမ္ဘာကြီး ပျက်စီးသွားတော့မှာ ဖြစ်ပါသဖြင့် … တခြား ကမ္ဘာအသစ်တစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲနေထိုင်ရန် လေများကို ပြောင်းရွှေ့ထားကြောင်း ..
အမေရိကန်သမ္မတစီးနင်းလိုက်ပါလာသော ကားမှာ ရုတ်တရက် ဘီးပေါက်သွားပါသဖြင့် ၄င်းဘီးအား လေပြန်ဖြည့်ရန် ကမ္ဘာလေထု အားလုံးကို ယူသွားကြောင်း …
မန္တလေးမြို့၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်ရှိ ဘုရားပွဲတစ်ခုမှ မိုးပျံပူပေါင်းသယ် တစ်ယောက် လေထုအားလုံးကို အကုန်ယူသွားကြောင်း …
ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှ .. ကမ္ဘာလေထုထိန်းသိမ်းရန်အတွက် .. တစ်ရက်ခြားတစ်ခါသာ လေထုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း …
ဒီသတင်းတွေ အသာထား .. ခု အသက်ရှူလို့ မရတာ ပြဿနာ …
“ဟေ့လူ … ခင်များသိလား .. လေဘယ်မှာ ရှိလဲဆိုတာ …”
ထိုလူက ကျွန်တော့် စကားကို ဂရုတောင်မစိုက်ပါဘူး ..။ သူ့ဘာသာ မြက်ရိတ်နေလေရဲ့။
“ဟာ .. ဟေ့လူ .. ခင်များကော သိလား .. လေမရှိရင် ကျုပ်တို့ သေသွားနိုင်တယ်ဗျ ..”
ဘာလဲဟ.. ဆိုသည့်ပုံစံဖြင့် … ကျွန်တော့်ကို ဘုကြည့်ကြည့်ပြီး ထွက်သွားပြန်တယ် ..။
လူတွေကို ကြည့်ပြန်တော့လည်း ပုံမှန်ပါပဲ .. ကျွန်တော်က လွဲလို့ပေါ. ။
“တောက် .. တော်တော်နေနိုင်ကြတဲ့ လူတွေ ..”
ကျွန်တော်အားမလိုအားမရ ကျိန်ဆဲမိပါတယ် ..။ ဟုတ်တယ်လေ .. ခင်များပဲ စဉ်းစားကြည့် .. လေမရှိလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲဗျ.။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော် .. ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ ရောက်ချင်တဲ့ နေရာ ရောက်ပါစေ၊ ကျွန်တော် ပြေးပါတယ်။ အားသွန်ခွန်စိုက်။ အားလုံးကို ကျွန်တော် ကျော်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ မရောက်ဘူးတဲ့ နေရာတွေလည်း ရောက်လို့။ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်တွေဟာ တဖြေးဖြေးေ၀၀ါးလို့။ အရာရာဟာ မှုန်ဝါးလာတယ်။ ရင်ထဲမှာ မောဟိုက်လို့။ ပြေးလေ မောလေ။ မောလေ.. လေရှူချင်လေပေါ့ ..။ ဒါပေမယ့် လေရှိတဲ့ နေရာကို မရောက်နိုင်သေးဘူး။
ရုတ်တရက် ကျွန်တော် ရပ်တန့်လိုက်မိတယ်။ မောလွန်းလို့ ဘာမှလည်း မပြောနိုင်။ လူတွေက ကျွန်တော်ကို မမြင်ဘူးတဲ့ သတ္တ၀ါတစ်ကောင်လို ၀ိုင်းကြည့်နေပါတယ်။ ကျွန်တော် ဂရုမစိုက်ပါဘူး။
နေမင်းဟာ ကျွန်တော် ခေါင်းပေါ်တည့်တည့်က ပူပြနေပါတယ်။ သစ်ပင်တွေဟာ ပိုပြီး ခြောက်သွေ့နေပါတယ်။
ရုတ်တရက် .. ကျွန်တော်ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ ချွေးစီးချွေးပေါက်များနှင့် ကျွန်တော်တစ်ကိုယ်လုံး ရွှဲစိုလို့။ ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ… လောကကြီး ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ..။ ကျွန်တော် စူးစူးဝါးဝါး အော်ဟစ်လိုက်သော်လည်း ကျွန်တော်အသံတွေက မထွက်တော့။
“အား… အ .. အာ.. အူး ..”
ကျွန်တော် .. ဘာသံမှ မထွက်နိုင်တော့။
အိပ်မက်လိုလို၊ ကျွန်တော့် မှတ်ညဏ်တွေသည် ဟိုး.. ငယ်ဘ၀သို့ စိုက်ရောက်သွားသည်။
အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်က ရိုးရိုးစင်းစင်းလေး။ လိုချင်တာ သိပ်မများပါဘူး။ အင်း .. အရုပ်သေနတ်တစ်လက်နဲ့ .. မုန့်တစ်ခုရှိရင် ကျွန်တော် အိုကေပါပြီ။ နောက်တော့… တရိပ်ရိပ်နဲ့ ပြောင်းလဲလာခဲ့တာ ….
စာအုပ် … အ၀တ်အစား…
လက်ဖက်ရည် .. ကော်ဖီ … အိုင်းစတိုင်း …
ဆိုင်ကယ် .. တီဗွီ .. ရုပ်ရှင် … ဆေးလိပ် …
ကွန်ပျူတာ … သီချင်း .. ၀တ္ထု ..
လွတ်လပ်မှု … ပိုက်ဆံအိတ် .. အချစ် …
မိသားစု .. စိန်လက်စွပ် … ကဗျာ … စက်ရုပ် .. ပရာဒို …
မန်ချက်စတာ… စင်္ကာပူ .. စာမေးပွဲအောင်လက်မှတ် … လခ … ဆုတံဆိပ် …
ဖိနပ် … အိမ်တစ်လုံး … အလုပ်အကိုင် .. အင်တာနက် …
တည်ငြိမ်မှု … ဥယျာဉ် … အင်းယားကန်.. ၀င်္ကပါ .. စီဒီချပ် … နာရီ …
ဘာတွေလဲ .. ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ .. ကျွန်တော် လိုချင်ခဲ့တာတွေ .. တော်တော်များခြဲ့ပီပဲ … တစ်နေ့တာ ကုန်ဆုံးဖို့အရေး အရာဝတ္ထုတွေ တော်တော်များများရှိမှ .. ကျွန်တော် ကုန်ဆုံးနိုင်တယ် …
ခု လိုချင်တာ တစ်ခုတည်း … “လေ …”
ဘယ်မှာလဲ … “လေ” ….
ဘာအရာဝတ္ထုကိုမှ …. ကျွန်တော် …….. မလိုချင်တော့ …………….။
“ဟေ့ လူ .. ခင်များ .. ဘာလုပ်နေတာလဲ …”
ရုတ်တရက် အသံလာရာကို ကြည့်မိတော့ လူတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ပြီး မေးခွန်းထုတ်နေတယ်။
“ဟေ့ လူ .. ခင်များ .. ဘာလုပ်နေတာလဲလို့ ..”
ကျွန်တော် .. ဖြေချင်သော်လည်း … အသံမထွက်နိုင်တော့ ..။
ထိုလူက နောက်ထပ် ..ဆက်ပြောပါတယ် ….
”ဒီမယ် .. ဟေ့လူ …
ခင်များကို ကျွန်တော်ကြည့်နေတာကြာပြီ …
ခင်များ.. အဲဒီအတိုင်း ..
ခင်များ နှာခေါင်းနဲ့ ပါးစပ်ကို ဆက်ပိတ်ထားရင် .. မကြာခင် .. ခင်များ သေသွားလိမ့်မယ်ဗျ …” တဲ့ ။
Posted in: ၀တ္ထုတို,အက်ဆေး